Toamasina : Fanofana fiara hitondrana razana, nivadika ho halatra miaro vono olona
mercredi, 17 février 2021 12:01
Very ny fiara Mazda miloko volondavenona iray miaraka amin'ny mpamiliny. Nanao fitarainana tamin'ny Zandarimaria tao Toamasina ny tompony ny 25 janoary 2021 fa fiara nofain'olona hitondra razana ny 18 janoary niala tao Toamasina ho any Betampona, Distrika Mahanoro. Fotoana farany izay nahazoana antso azy ireo.
Nahitàna razana iray tsy fantatra tany Mandalahy Kaominina Alakamisy-Ambohimaha Distrika Lalangina Faritra Matsiatra Ambony ny 04 febroary 2021, izay nomarinin'ny mpitory fa tena mpamiliny tokoa ilay razana ary efa nalevina.
Natao ny fikarohana lalina ka tratra ny jiolahy iray izay mbola nitazona sy nampiasa ny findain'ilay mpamily maty. Io jiolahy io avy eo no namboraka ireo asa ratsy natao sy nanoro ireo namany namono ilay mpamily sy ny garazy misy ilay fiara, izay efa voaova loko ho mena fa tsy volondavenona intsony.
Fantatra ihany koa fa tsy misy akory ilay hoe : razana ho aterina any Mahanoro.
Jiolahy miisa efatra sy ramatoa roa no voasambotry ny "Section de Recherches Criminelles (SRC)" Zandarimaria Toamasina hatreto, izay nandray anjara mivantana sy mpimasin-dahalo miaraka amin'ireo odigasy sy mohara nampiasain'izy ireo.
Naiditra am-ponja ao Ambalatavoahangy ny 16 febroary 2021 avokoa ireo olon-dratsy.
Mbola misy jiolahy roa karohina.